Neymar Jr oo ka saaray Cristiano Ronaldo kooxdiisa Riyada ee ka kooban 5 ciyaatoy oo kaliya – Gool FM
(PSG) 23 Luulyo 2018. Xidiga kooxda Paris Saint-Germain Neymar Jr ayaa la hadlay saxaafada kadib markii uu ka qeyb galay tartan loogu magac daray “Neymar Jr’s Five” magaalada Sao Paulo ee dalka Brazil, kaasoo ay kooxdiiba ka kooban tahay kaliya 5 ciyaaryahan oo kaliya.
Neymar Jr ayaa wax laga weydiiyay kooxdiisa riyada ee ka kooban 5 ciyaartoy si uu kaga garab ciyaaro tartankan oo kale wuxuuna durabadiiba kaga jawaab celiyay.
“Dabcan waxaan kaga garab ciyaari lahaa, xidigaha Lionel Messi, Dani Alves, Thiago Silva, Gabriel Jesus”.
Taasoo ka dhigtay in Neymar Jr uu doortay saaxiibkiis horey ee kooxda Barcelona ee Messi iyo saddex xidig ee reer Brazil ah, laba ka mid ah waxay ka wada ciyaaraan PSG, kuwaasoo kala ah Dani Alves iyo Thiago Silva.
Wargeyska reer Brazil ayaa shaaca ka qaaday sida ay layaab ula noqotay in magaca Cristiano Ronaldo uusan kusoo darsan Neymar Jr kooxdiisa riyada ee ka kooban 5 xidig. Maadaama ay dadka intiisa badan aaminsan yihiin inuu yahay kan ugu fiican kubada cagta aduunka xiligan isla markaana uu sidaas kala siman yahay Lionel Messi.